Izeluleko ezili-9 zobuhle wonke umuntu wesilisa adinga ukuzazi | Amadoda aSitayela
Izeluleko ezili-9 zobuhle wonke umuntu wesilisa adinga ukuzazi
U-Alicia tomero | | Kugundiwe, Izimonyo, Ukunakekelwa komuntu siqu, Kufanelekile
Ubuhle besilisa buyaziswa futhi buhlonishwa njengobuhle besifazane, yize singakajwayeli kangako. Kunamadoda amaningi athanda ukubukeka emuhle futhi anakekele ukubukeka kwawo, ubuso bawo, izinwele zawo ... futhi yingakho bathanda ukufunda ngezikhathi ezithile ukuthi bangakhuphula kanjani ukuzethemba kwabo bese uthola amathiphu wobuhle. Ukuze wenze lokhu, kufanele uzinakekele futhi wazi ukuthi ungayihlakulela kanjani indlela yokuphila.
Kukhona iqiniso elibalulekile maqondana nokunakekelwa kwesikhumba samadoda elihluke kakhulu kunelabesifazane. I-epidermis ingu-30% mkhulu, iqukethe izindlala ezinamabhande amaningi futhi ama-pores ayo avelele kakhulu. Ekuphetheni, isikhumba sakho sinamafutha kakhulu futhi siyiminyaka ehlukile ngakho-ke ukwelashwa kwakho kuzohluka ngokuphelele kunokowesifazane.
1 Ukunakekelwa okuyisisekelo komuntu
2 Amathiphu wobuhle kwabesilisa
3 Yini okufanele indoda ibe nayo esikhwameni sayo sezinto zokugeza?
Ukunakekelwa okuyisisekelo komuntu
Ubuso bukhombisa umphefumulo futhi okuholela kuzeluleko eziningi zobuhle nokwelashwa kugxile kulelo phuzu. Kufanele wazi ukuthi ungayilawula kanjani i-PH yesikhumba, ngoba iphansi kunaleso sowesifazane futhi ithambekele kakhulu ekungcoleni nasemqubeni. Njengoba iminyaka ihamba, isikhumba siya soma futhi yingakho ethula ngokuzumayo lezo zimpawu zokuguga zimakwe kangaka.
Amehlo akhombisa nokudlula kweminyaka nesimo noma isimo sokusebenza komzimba wakho. Ukwazi ukuthi ungayinakekela kanjani le ndawo nakho kubalulekile njengoba indawo lapho ugunda khona, ngoba ithambekele ekubeni nokuzwela futhi ingasabela kunoma yikuphi okungalindelekile kalula.
Ukunakekelwa kwezinwele nakho kubalulekile, kanye nokuthi unezinwele ezimfishane, ezinde, ezisontekile noma ubuhle obufanayo bentshebe. Ungafunda ukuthi unganakekelwa kanjani izinwele zakho ngokufunda Lesi sihloko noma ukuthi ungazinakekela kanjani izilevu zakho igxathu negxathu ngokuchofoza lesi sixhumanisi
Ukunakekelwa komuntu siqu komzimba wakho nakho kunethonya elikhulu emzimbeni nasengqondweni. Uma ungomunye walabo abangakulandeli indlela efanele yokudla futhi kuyindida ungazama funda lapha imiphumela yokungadli kahle. Ukudlala njalo ezemidlalo nakho kubalulekile futhi kuhlala kusebenza njengezeluleko eziyisisekelo.
Amathiphu wobuhle kwabesilisa
Kubalulekile ukuthi uzithole unamandla futhi uphumule umzimba. Ukulala amahora angu-7 kuya kwangu-8 ngosuku kuyisihluthulelo, njengokudla ukudla okulungile futhi ukuzijwayeza ezemidlalo nge-assiduity noma umthethonqubo. Ukusuka kuleli phuzu Uzohlala uthola umzimba osebenzayo futhi lokho kuzobonakala ekubukekeni kwakho.
Kufanele unakekele izinwele zakho: ukugeza izinwele ngendlela efanele kubalulekile. Kumele kwenziwe ngezinsuku ezihlukile nge-shampoo efanelekile yohlobo lwezinwele zakho. Uma, ngakolunye uhlangothi, udlala imidlalo noma unohlobo oluthile lomsebenzi oludinga ukuthi uwugeze nsuku zonke, hlala ukhetha i-shampoo oyisebenzisayo nsuku zonke.
Ngokunakekela noma ukunakekela intshebe: Endabeni yokushefa, zama ukukwenza ngemuva kokugeza, ngoba kuzokwenza kube lula ukwenza kwayo. Bese ugcoba okuhle ngemuva kokushefa ukuze ugweme ukucasuka. Uma into yakho ukunakekela intshebe yakho, sebenzisa ama-shampoo ngaso sonke isikhathi kulolu hlobo lwezinwele bese ugcoba uwoyela ukuze uzelaphe futhi ubukeke uphilile futhi ungenakho ukuqina okungako.
Ukunakekelwa kobuso, geza ubuso bakho nsuku zonke ngamanzi abandayo bese usebenzisa amafutha okuthambisa emini. Ungakhohlwa ukunakekela amehlo akho, ngoba lokhu kuyakhetha umugqa wamehlo omuhle kakhulu ngoba kuzoba yisisekelo.
Kubalulekile ukuthi ube nezicuci ezilungisiwe ezibukeka zemvelo futhi zibanzi, azizacile futhi zikhombe.
Ukushiswa eceleni njengezinwele kubalulekile ukuthi zihlala zibukeka zizinhle, zicocekile futhi zilungisiwe. Kufanele zenziwe ziphakame ngokulingana okufanayo futhi akufanele neze zisikwe ngaphezulu kunaphezulu kwendlebe.
Ebusuku futhi sebenzisa isithambisi esihle ebusweni. Ungayihambisana neserum ethile. Lolu hlobo lukakhilimu lusebenza kahle kakhulu ngenkathi ulele kusukela inqubo yokuvuselela isikhumba yenzeka phakathi kuka-2 no-4 ekuseni.
Uma uthanda ukudlula lokhu kunakekelwa okuyisisekelo, kufanele ukwenze ikhasi lobuso ngendlela yokuzenzela futhi ngendlela ejwayelekile njengoba kuzosiza ukususa ukungcola. Amaski azosiza nokwenza ngcono ukubukeka kwakho ngoba izithako zabo ezisebenzayo zingena esikhunjeni sakho futhi zenze i-hydration eyengeziwe.
Wonke umzimba ungomunye wokukhohlwa kakhulu, kodwa futhi singakwazi ukunakekela intamo yethu, ukuhlanza, izandla nezinyawo. Ngalokhu ungafunda ngokuningiliziwe ukuthi «nikeza umbono omuhle ezandleni zakho»Noma umhlahlandlela ku-«ungazithola kanjani izinyawo ezifanele ukugqoka ehlobo ».
Yini okufanele indoda ibe nayo esikhwameni sayo sezinto zokugeza?
Kubukeka kunelukuluku ukucabanga ukuthi owesilisa angaba nesikhwama sezinto zangasese esinemikhiqizo yobuhle, kepha iqiniso ukuthi yebo, njengomthetho ojwayelekile bayathanda nokuphatha eyabo imikhiqizo ngoba nabo bayazinakekela. Kwabesilisa abaningi, ukuphatha isikhwama sezindlu zangasese kubalulekile futhi ngeke ungaphuthelwa: i-deodorant, i-moisturizer ebusweni, amakha, imikhiqizo yokushefa efana ne-after shave ne-gel noma i-shampoo yokugeza. Futhi uma othile eqine ngokwengeziwe ngokunakekela kwabo, kuzoba khona ngisho i- ukulungisa i-lip balm.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izeluleko ezili-9 zobuhle wonke umuntu wesilisa adinga ukuzazi
Ngabe umshado ukhona ngaphandle kocansi?
Ungaba kanjani indoda ephelele?